China YF-H-203-1 akpụkpọ anụ abụọ sara mbara sarauta drawer Manufacturer na Supplier | Yifan
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụma kọfị table nchekwa, a akpụkpọ anụ inwego-top table bụ ezigbo. Ihe mara mma, nke oge a ọ bụghị naanị na-azọpụta gị ohere, imewe mgbanwe nwere oge ọ bụla mgbe ọ na-enye ọtụtụ ọrụ.
Atụmatụ Nchekwa, Drawers, Faux Akpụkpọ anụ
Contemporary faux akpụkpọ anụ upholstery imewe; Mmezu akwa profaịlụ, akwa akwa, yana arịa ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ
Ezigbo, wheeled tracks na-eduzi otu drọwa ma na-adị mfe; Na ere dika otu abali
Iji ihe osise abụọ maka ebe nchekwa na ebe a na-emecha ihu igwe, abalị a na-enye ebe nchekwa kacha mma ebe ị na-ewere ohere dị oke ala ma na-enye ezigbo aka iji mechie aka.
Site na iweli elu, ị nwekwara onwe gị ọrụ sara mbara ka ị na-anọdụ ala n'ihe ndina gị. Ma ị na-arụ ọrụ na laptọọpụ gị ma ọ bụ na-eri nri abalị n'ihu telivishọn, njirimara a dị mma bụ ịdị elu nke mma. Ihe ngbanwe nke ogo ogo 360 dị elu bụ ego agbakwunyere. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ebe a na-edebe kọfị kọfị, ọ ga-enye gị ohere maka blanket, ọfịs ọfịs ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dabara adaba.
Tebụl na-adịgide adịgide na nke bara uru zuru oke maka ịrụ ọrụ na laptọọpụ gị, ide ihe, ịbịaru ma ọ bụ nkasi obi na-eri nri ụtụtụ n'elu akwa ma ọ bụ na sofa
Ọ bụrụ na ihe (ihe) gị rutere mebiri emebi ma ọ bụ nwee nkwarụ biko kpọtụrụ anyị ozugbo +86 19933122457 ma ọ bụ zitere anyị email tmino@hbyfwood.com. Biko nye nọmba gị na onyonyo nke ihe (s) mebiri emebi. Ndị otu anyị lọghachitere ga-enyocha ozi ị nyere ma zaghachi gị n'ime oge azụmahịa 24. Biko dị njikere mezue usoro a n'ime ụbọchị iri na anọ nke ụbọchị nnyefe.
Nke gara aga: YF-H-203 Akụkụ Akụkụ maka Bed Wood Igwe anaghị agba nchara Gold
Osote: YF-H-203-2 ebuli elu multifunction sidetable
YF-H-207 Na-egbuke egbuke nke Oge A
YF-H-212 h Nightstand upholstered àkwà Isiokwu ...